musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Japan Kuputsa Nhau » Japan kupedza COVID-19 mamiriro ekukurumidzira vhiki ino
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Japan Kuputsa Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Hurumende yeJapan zvisinei inonzi iri kufunga kubvumidza magavhuna kuti ashandise matanho eECVID-19 emwedzi mushure mekunge zvirambidzo zviripo zvapera.
Nyika yechishanu yeJapan yeCOVID-19 yekukurumidzira yave iri yakareba kwazvo kuburikidza nedenda.
Mutungamiriri weJapan akataura kuti hurumende yake ichaita danho repamutemo neChipiri manheru.
COVID-19 mamiriro ekukurumidzira parizvino ari kufukidza Tokyo nematunhu 18 munyika yese.
Hurumende yeJapan iri kutarisirwa kuti isawedzere COVID-19 mamiriro ekukurumidzira achifukidza Tokyo nematunhu gumi nematanhatu nyika yese painopera kupera kwaGunyana, venhau vehurumende vakati neMuvhuro.
Nyika yechishanu nyika yechimbichimbi, iyo yakatanga kuziviswa mumatunhu mana muna Kubvumbi, ndiyo yakave yakareba kwazvo. Yakawedzerwa kusvika makumi maviri nemashanu matunhu asati asimudzwa munaJune mune ese kunze kweOkinawa. Iwo murairo wakapihwa zvakare muTokyo muna Chikunguru, zvisinei, mushure mekumuka kwakatanga kubuda muguta guru mukupera kwaJune.
Nyika yacho Mutungamiriri Yoshihide Suga akaudza vatori venhau kuti hurumende yake ichaita danho repamutemo nemusi weChipiri manheru zvichitevera kutaurirana nenyanzvi dzezvirwere zvinotapukira kubva kukomisheni huru yecoronavirus.
Nekudaro, Suga akawedzera kuti zvakafanira kurerutsa COVID-19 zvirango zvishoma nezvishoma.
If Japanimamiriro ekukurumidzira, pari zvino ari kushanda mumatunhu gumi nemapfumbamwe, anosimudzwa zvakakwana, ichave iri nguva yekutanga kubva kutanga kwaKubvumbi kuti hakuna matunhu ari pasi peanorayirwa nehurumende zvakatemerwa COVID-19.
Parizvino, hapana kumatunhu 19 akakumbira kuwedzerwa kwechimbichimbi.
"Zvinoita sekuti hurumende ichakwanisa kusimudza emergency sezvakarongwa kupera kwemwedzi," gurukota rezvehutano Norihisa Tamura akadaro pachirongwa cheterevhizheni nemusi weSvondo.
Nepo matsva matsva ari kudzikira, Tamura akayambira veruzhinji kuti vasaregedze varindi pasi vachitya kukonzera kukonzeresa kwechando. Akawedzera kuti zvirambidzo zvakasiyana, kusanganisira zvakaderedzwa maawa ebhizinesi emaresitorendi nemabhawa, zvinofanirwa kurerutswa zvishoma nezvishoma, uye kuti vakuru vakuru vanofanirwa kusimudzira kugona kwehutano - nekumisikidza zvimwe zvivakwa zvevarwere vanofashukira uye kutsvaga vashandi vezvokurapa, pakati pezvimwe zvinhu - mukugadzirira kuputika kunotevera.
Vhiki rapera, JapaniMuchinda wekudzivirira masoja Taro Kono akazivisa kuti nyika ichatanga kupa COVID-19 booster shots kuvashandi vekurapa mukupera kwegore, uye kune vakwegura vagari mugore idzva.
Kubva neMuvhuro, vangangoita 52% yevagari vemuJapan vakatambira madosi maviri emushonga weCCVID-19.